ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၅) - Myanmar Network
ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၅)
Posted by Language Republic on November 23, 2015 at 10:51 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မိမိက များစွာ အထင်ကြီးသောသူ (သို့) အရာကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသည့် ချစ်စရာ ကောင်းသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ - She thinks Barry’s the bee’s knees’. (သူမက Barry ကို အရမ်းအထင်ကြီးတာပဲ။)
၄င်းအသုံးအနှုန်းကို ထေ့ငေါ့ပြောရာ၌လည်း အသုံးပြုပါသည်။
သာယာနာပျော်ဖွယ်မကောင်းလှသော်လည်း Chunder သည် ဗြိတိသျှ ဗန်းစကားများ၏ အဓိက ကျသော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ "အန်သည်" (သို့) "နေမကောင်းဖြစ်သည်"ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ၄င်းသည် အရက်မူးသော ညများ (သို့) အလွန်အမင်းနေမကောင်းဖြစ်သောအခါများနှင့် အမြဲတမ်းလိုလို ဆက်နွှယ်၍ အသုံးပြု ပါသည်။
ဥပမာ - I ateabad pizza last night after too many drinks and chundered in the street. (မနေ့ညက အရက်တော်တော်များများသောက်ပြီး သိုးနေတဲ့ ပီဇာကို စားလိုက်တော့ လမ်းမှာတင် အန်လိုက်ရတယ်။")
ဖြစ်နိုင်သမျှ အရာတိုင်းကို လှောင်ပြောင်ပြီး သရော်လေ့ရှိတဲ့ ဗြိတိသျှတွေရဲ့ အကျင့်အရ "taking the piss"သည် တကယ့်ကို ရေပန်းစားပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသော ဗြိတိသျှ ဗန်းစကားတစ်ခုဖြစ် ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာကို သရော်ခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုကို ဖျက်ပြီးပြက်လုံးထုတ်ခြင်း (သို့) အများအားဖြင့်တော့တစ်ခုခု ကို ထေ့ငေါ့ပြီး လှောင်ပြောင်ခြင်းဟူသော အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ - The guys on TV last night were taking the piss out of the government again. (ညက TV ထဲက လူတွေက အစိုးရကို နောက်ထပ် ထေ့ငေါ့ပြီးလှောင်ပြောင်နေကြတယ်။")
Permalink Reply by U Hla Htay on November 23, 2015 at 16:14
"chunder " is not found in dictionary.
Permalink Reply by Nyein Chan Ko Ko on January 9, 2016 at 11:45
Hi,brother, which dictionary r u using? You should use LONGMAN Dictionary. You will find this meaning!